Seenetiin Yunaayitid Isteets Bajata raggasise
Faayilii - Waajira bakka bu'oota uummataa Yunaaytid Isteets
Seenatiin Yunaayitid Isteets baajata Doolaaraa triliyoonii 3.5 sagalee dhiphoodhaan raggaasiseeraa. Senetichii bajaticha kan raggaasise sagalee 50 fi 49n yemmuu ta’u, caalaan baajetichaa bulchiinsii Joo Bayidan tajaajila maatii, fayyaadhaa fi eegumsaa naannoof kan ooluchuudha jedhameeraa.
Seenetii keessatii warra sagalee caalaa qaban kan ogganaan bakka bu’aan paartii dimokiraatotaa Chaak Shuumar akka jedhanitti, baajatichii hojii umuudhaaf , maatiiwan Amerikaa gargaaruudhaaf akkasumas lolla jijjirama haalaa qilleensaa irratti geggefamaa jiruu gargaaruudhaaf akka oolu himanii,jijjiramaa dhalootaa fiduudhaaf akka dinaggedeen yunaayitid Isteets lamiiwan biyyatii warren jireenya walakkeesaa jiraataniif hoojatu taasisa jedhaniiruu.
Bakka bu’aan paartii Repabilikotaa Miich maakkoonel ituu bajatichii hin ragga’in duraa guyyaa kaleessaa seenetii keessatii akka dubbataniitii paartiin isaanii sagalee seericha hambisuu danda’u akka argachuu hin dandeenye himanii seerichii garuu waan hin yaadamneedhaa jedhanii akka itti hin gammane ibsaniiru.
Zaambiyaan Filannoo taasisuuf deemtti
Manni Murtii Sudaan Kibbaa roogessa Midiyaa hawaasaa adabeeraa
UNHCR Baqattootaa Eertiraa wajjin wal arguu isaa ibsame
TPLF naannoo Amaaraa keessatii Moo’amaa jiraa jira jedhan Gizaachewu Muluneeh